Windows 10 Ngomhla we-2020: Zonke iindaba eziza kufika ngohlaziyo olulandelayo | Iindaba zeGajethi
Windows 10 Ngomhla we-2020: Zonke iindaba ezizakufika ngohlaziyo olulandelayo
Xa uMicrosoft wakhupha ngokusesikweni Windows 10 ngoJulayi 2015, inkampani kaStaya Nadella ibanga ukuba oku iya kuba luhlobo lwamva nje lweWindows, Akuyi kubakho ezinye iinguqulelo ezinamanani amatsha. Ukususela ngoku, phantse i-5 iminyaka idlulile kwaye oku ukucinga kwicala isigebenga computer kuhlala ingatshintshanga.
Isicwangciso esilandelwa nguMicrosoft sisekwe kuso khupha uhlaziyo ezimbini eziphambili zonyaka, isasazeke kwikota yesibini neyesine yonyaka. Olu hlaziyo lutsha ludibanisa imisebenzi emitsha ukuphucula ukusebenza kwayo kodwa ayikokwaphula umhlaba njengangaphambili.
Zombini iiWindows kunye neeMacOS zi kulinganiselwe namhlanje kwitekhnoloji ekhoyo. Logama nje oku kungahambeli phambili, abayi kuba nakho ukubandakanya ukusebenza okutsha, nangona bezakuphucula ezo zisibonelelayo, into exatyiswayo ngokuqinisekileyo.
The Windows 2020 Ngomhla we-10 uhlaziyo, oluza kufikelela kwintengiso, lusinika inani elikhulu lezinto ezintsha, uninzi lwazo lwangaphakathi kwaye luhambelana nolawulo lwenkqubo. Kodwa ikwasinika iindaba kwamanye amacandelo anje ngezaziso, icandelo iMicrosoft lisebenze ngaphezulu kakhulu kune-Apple, nangona ikhona kwi-macOS ixesha elide kunakuyo Windows 10.
Inqaku elinye elize nohlaziyo lwangaphambili olukhulu lweWindows yayingumsebenzi weTimeLine, umsebenzi owenzayo bambalwa kakhulu abantu abaphela bekufumanisa kuluncedo, ngenxa yendawo ekuyo, kuba ifumaneka kuphela xa sifuna ukwenza okanye sitshintshe phakathi kweidesktops.
Kwi Windows 10 siyaqhubeka nokufumana iindlela ezininzi zeWindows 7, ezinje nge Iphaneli yokulawula, Iphaneli esivumela ukuba senze uhlengahlengiso kwinkqubo esingenayo ngokulawula ipaneli entsha yoqwalaselo lweWindows. Amanye amarhe acebisa ukuba iWindows ifuna ukuyenza inyamalale, ngethamsanqa, ukuba amarhe awazalisekanga ngeWindows 10 ngoMeyi 2020. Okwangoku, izakuqhubeka ukuhlala kunye kwaye kungachazeki.
1 Khipha ii -apps zemveli
3 Ibhokisi yokukhangela
4 Iidesika ezifanelekileyo
5 Olunye ulwazi malunga nokuqhuba kuMphathi woMsebenzi
6 Qalisa kwakhona izicelo
7 Ubume benethiwekhi
8 Ezinye ezilungileyo Windows 10 ngoMeyi 2020
9 Nini Windows 10 ikhutshwe ngoMeyi 2020
Khipha ii -apps zemveli
Ayisoze ine imvula ngokuthanda komntu wonke. Uninzi lwabasebenzisi, zombini izixhobo zeselfowuni kunye nedesktop abafuni ukubona izicelo zomthonyama nakwipeyinti ezingazange zisebenzise kwaye zilapho, zihlala zibonakala, zicaphukisa amehlo, zihlala kwindawo (nangona zincinci) ...
Windows 10 Uhlaziyo lukaMeyi, luya kusivumela khipha naluphi na usetyenziso lwendalo ezinje nge-WordPad, Paint, usetyenziso olungadityaniswanga kwinkqubo, kodwa yinxalenye yayo ukuze ikwazi ukubhala okanye ukuhlela kancinci iifoto zethu ngaphandle kokubhenela kwisoftware yomntu wesithathu.
Windows 10 unokuziqhayisa ngokunika inkqubo yokwazisa ukuba ezinye iinkqubo zokusebenza zingathanda kakhulu, zombini idesktop kunye neselula. Nangona kunjalo, ukusuka kwaMicrosoft bafuna ukongeza ezinye iinketho zokumisela kunye nokwenza ngokwezifiso esele isinike yona ukuza kuthi ga ngoku, into ngokungathandabuzekiyo exatyiswayo kwaye eya kwamkelwa kakuhle ngabasebenzisi.
As Windows 10 iguqukile, ikwanjalo nebhokisi yokukhangela, ibhokisi yokukhangela ngoku eluncedo kakhulu kwaye eguquguqukayo kuneenguqulelo zokuqala zeWindows 10. NgoMeyi 2020, Microsoft iphucule ialgorithm efumanisa inqanaba lomsebenzi wesalathiso sefayile ukuze amava ophando akhawuleze kwaye athathe ixesha elincinci.
Xa sisebenza ngaphezulu kwesicelo esinye ngaxeshanye, ukuba iliso lethu alikho ngokwaneleyo ukuba lingavula izicelo ezimbini kunye, kuyacetyiswa Sebenzisa iidesktop ezibonakalayo, inqaku elitsha elivela esandleni Windows 10 kwaye ejolise kwimveliso.
Nangona kunjalo, yazalwa isisiqhwala, kuba yayinemisebenzi ethile esivumela ukuba siququzelele umsebenzi ngendlela entofontofo. NgoMeyi 2020, enye yezi ngxaki isonjululwe, kuba iyasivumela yongeza igama kwiidesktops, igama eligcinwayo xa sicima izixhobo zethu, esivumela ukuba senze iidesika ezahlukeneyo / amaziko okusebenza.
Idesktop nganye inokubonisa usetyenziso esizifunayo ngaphandle kokugqobhoza kwidesktop enye. Ngelishwa, okwangoku akusivumeli okwangoku Lungisa iodolo yeidesktopsOko kukuthi, hambisa idesktop ukuze ibe yeyokuqala endaweni yeyokugqibela (okanye ngokuchaseneyo) okanye utshintshe iodolo yazo.
Olunye ulwazi malunga nokuqhuba kuMphathi woMsebenzi
Umphathi woMsebenzi osikelelekileyo, loo nkqubo isebenza (asinakuyithatha njengesicelo uqobo) esivumela ukuba siqwalasele ngokukhawuleza okwenzekayo kwiqela lethu. Ngohlaziyo olutsha, iiWindows ziya kusinika Ulwazi olwahlukileyo yeyunithi nganye esinayo kwiqela lethu. Kodwa ukongeza, iya kusivumela ukuba sazi ifayile ye- ubushushu bekhadi lethu lemizobo ngaphandle kokusebenzisa isoftware yomenzi.
Qalisa kwakhona izicelo
Kuxhomekeka ekusebenziseni kwethu izixhobo zethu, ukusebenza okanye ukuzonwabisa, kungenzeka njalo masihlale sivula usetyenziso olufanayo. Emva kokufaka olu hlaziyo lutsha, Windows 10 yongeza i-Restart application function, umsebenzi ojongana ngokuzenzekelayo nokuvula zonke izicelo ebesizivulile ngaphambi kokuphuma, ukuqala kwakhona ikhompyuter yethu okanye ukuyicima.
Umsebenzi Iyafana naleyo ibonelelwa zizikhangeli. Xa siseta iphepha lasekhaya kwisikhangeli, ukulivula okokuqala kuya kuhlala kulayisha elo phepha. Kule meko, ziya kuba zizicelo ezifanayo ebesizisebenzisa.
Eli nqaku lilungiselelwe ngokuqinisekileyo ukwandisa imveliso yethu, nangona ixesha lokuqala leqela lethu liqhubeka. Ewe kunjalo, nje ukuba sihlale phambi kweqela lethu, zonke izicelo ebesifuna ukuzisebenzisa sele zivulekile kwaye zisasazwe kwiidesika ezahlukeneyo (ukuba siyazisebenzisa).
Ngaphakathi kwenethiwekhi kunye ne-Intanethi esezantsi, olu hlaziyo lutsha Isinika ulwazi ngakumbi malunga nenethiwekhi yethu, esivumela ukuba sikwazi ukufikelela ngokulula kwiipropathi zonxibelelwano lwethu, jonga kwaye sinciphise ukusetyenziswa kwedatha kwizicelo esizifakileyo kwikhompyuter yethu kwaye ezinxibelelana ne-intanethi ...
Ezinye ezilungileyo Windows 10 ngoMeyi 2020
Iimpawu ezintsha zeefolda kwiWindows Explorer.
Iimpawu ezintsha kwi-DirectX 12
Guqula isantya sesikhombisi
Ikhaltyhuleyitha inokuxhonywa ukuba ibe ngaphezulu kwazo zonke usetyenziso
Imo ekhuselekileyo isivumela ukuba sisebenzise i-PIN kwiWindows Hello
Imisebenzi emitsha kwicandelo lofikelelo
Olunye ukhetho olunokubakho kwiziko lokuphawula
Incwadana yokubuyisela ibuya kodwa kwisandla sevenkile yesicelo.
Nini Windows 10 ikhutshwe ngoMeyi 2020
Ukungakhuphi kwakhona iinguqulelo ezintsha zeWindows kuthetha ukuba zonke Windows 10 iikhompyuter ezihlaziywa rhoqo kuhlobo lwamva nje olukhoyo namhlanje, ziya kuhlaziywa ngokuzenzekelayo kwaye simahla kwinguqulelo entsha Windows 10.
Njengoko igama layo libonisa, ukumiliselwa kwayo kunjalo icwangciselwe uMeyi 2020Oko kukuthi, kwiintsuku ezimbalwa. Okwangoku le nguqulelo iyafumaneka kwinkqubo yeMicrosoft Insider njengoguqulelo lwamva nje olukhoyo, iya kuba yeyokugqibela eya kuthi ifikelele kuzo zombini iikhompyuter ezithengisiweyo kunye nohlobo esiza kukwazi ukulukhuphela ngqo kwiwebhusayithi kaMicrosoft.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Windows » Windows 10 Ngomhla we-2020: Zonke iindaba ezizakufika ngohlaziyo olulandelayo
I-Crosscall Core-X4: I-smartphone engasendleleni [Ukujonga kwakhona]